तीस जना, जसले नेपाललाई उत्प्रेरित गरे | Suvadin !
शुभदिन मिडियाले पनि नेपाली राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वले यो अवधिमा लेखेको परीक्षाको रिजल्ट ‘नेपाल इन्स्पाइरर’मार्फत दिएको छ। सम्पादक मण्डल र विज्ञको सुझावमा शुभदिनले उत्कृष्ट तीस जनालाई ‘नेपाल इस्पाइरर’को सम्मान दिएको हो। पूर्ण स्वतन्त्रताका आधारमा विश्वमा नाम कमाएका नेपालीको कर्मकथा वैशाख १ गतेदेखि निरन्तर १० दिनसम्म प्रकाशित गरेर नेपाली जनतामा उत्साह र उल्लास भर्ने हाम्रो कोसिसलाई पाठकका रुपमा सबैले मन पराइदिनुभयो। यसका लागि शुभदिन टिम अनुग्रहित छ। र, किन छानिए ३० जना नेपाल इस्पाइरर त्यसको प्रष्टोक्ति पनि हामी दिन चाहन्छौं।
Apr 25, 2017 16:44
21.9k 78 3
Shared: 1.6k times | Share this on
काठमाडाैं, वैशाख १२ - नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएको छ। तर, लोकतन्त्र प्राप्तिको एक दसकमा नेपाली समाज त्यति सजिलै अघि बढ्न पाएको छैन। अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा लम्किने प्रयासमा छ। तर, जति प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती अपर्याप्त छन्। परिवर्तित अवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व छ। संविधान कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र वि.सं. २०७४ सालको माघ महिनाभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न संविधानले दिएको सीमाको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अर्कोतर्फ छँदैछ। त्यसैले अब चाहिँ केही आशा गर्न सक्ने वातावरण बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। मुलुकमा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई केलाउँदै अघि बढ्नपर्ने छ। स्थानीय तहको चुनावले नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने छ। जनता सरकारी कामकाजका लागि पाउने झण्झटबाट मुक्त हुने छन्। र, मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाली राजनीतिले लामो समयसम्म संक्रमणकालीन कालखण्ड भोगे पनि त्यसबीचमा धेरै काम भएका छन्, ती कार्यको लेखाजोखा नेपाली जनताले एक–एकगरी गरिरहेका छन्। यसबीचमा सम्भावनाका केही गोरेटा खनिएको थियो, केही नवीनतम् कार्य भएकै थिए। जनतालाई राहत दिनका लागि राजनीतिक दलहरूले पनि अठोट गरेकै थिए।
हो, त्यसको लेखाजोखा सञ्चार क्षेत्रले पनि गरिरहेको छ। शुभदिन मिडियाले पनि नेपाली राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वले यो अवधिमा लेखेको परीक्षाको रिजल्ट ‘नेपाल इन्स्पाइरर’मार्फत दिएको छ। सम्पादक मण्डल र विज्ञको सुझावमा शुभदिनले उत्कृष्ट तीस जनालाई ‘नेपाल इस्पाइरर’को सम्मान दिएको हो। पूर्ण स्वतन्त्रताका आधारमा विश्वमा नाम कमाएका नेपालीको कर्मकथा वैशाख १ गतेदेखि निरन्तर १० दिनसम्म प्रकाशित गरेर नेपाली जनतामा उत्साह र उल्लास भर्ने हाम्रो कोसिसलाई पाठकका रुपमा सबैले मन पराइदिनुभयो। यसका लागि शुभदिन टिम अनुग्रहित छ। र, किन छानिए ३० जना नेपाल इस्पाइरर त्यसको प्रष्टोक्ति पनि हामी दिन चाहन्छौं। अर्को वर्ष अझ सशक्त प्रस्तुतिसाथ नेपाल इस्पाइररको शृंखला लिएर आउने बाचा पनि गर्दछाैं।
गगन थापा : युवाका अाशा (Youth)
९ कक्षामै पढ्दा जसले पञ्चायती संविधान जलाए
गगन थापा नेपाली राजनीतिमा प्रखर, निडर र लोकप्रिय नेता हुन्। उनी जहाँ जान्छन्, जे गर्छन्, त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पाउँछ। विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अन्यायको विपक्षमा उनी आफ्नो मत खुलेर राख्छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद थापा अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय टेकेपछि देशभरि विद्यमान स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिमा सुधार आएको छ। उनले नयाँ–नयाँ नीति नियम, ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतालाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा दिएपछि उनको लोकप्रियता झन् बढिरहेको छ।
जनार्दन शर्मा : जसले ऊर्जाको मोर्चा पनि जिते (Male)
लोडसेडिङ अन्त्यका नायक जनार्दन
तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेनाका सहायक कमाण्डर जनार्दन शर्मा प्रभाकरले हरेक युद्ध मोर्चा जितेका थिए। त्यो संकटकालको घडी थियो। अशिक्षा, बेरोजगारी र ग्रामीण ऋणग्रस्तता झेलेका शर्मा त्यसै जनयुद्धमा लडेका थिएनन्, उनमाथि जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि शर्माले आफ्नो अठोटलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने अवसर पाए। र, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियानमार्फत उर्जामन्त्री शर्माले मुलुकमा उज्यालो छरे। १८ देखि २० घण्टासम्म विद्युत् नआएर आजित नागरिकका लागि योभन्दा ठुलो कोसेली के नै हुन्थ्यो र! त्यसैले मन्त्री शर्माको ‘नेपाल इस्पाइरर’ सम्मान नेपाली नागरिकको सम्मानका रुपमा हामी लिएका छौं। जनमतको सम्मानका रुपमा लिएका छौं।
सीतादेवी यादव : संघर्षशील इतिहास (Female)
मधेसको देहातदेखि सिंहदरबारसम्म
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाटै पति चन्द्रनारायणको क्रुरतापूर्वक हत्या गरियो। पतिको हत्याको शोकलाई शक्तिमा बदलिन्, सीतादेवी यादवले। कुनै बेलाका ‘जनयुद्धका कमान्डर’ पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा अहिले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री भएकी छन्। महिला, त्यसमा पनि मधेसी महिलाको यो असाधारण सफलता अरुका लागि निक्कै प्रेरणादायी छ। कांग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेकी यादवको काँधमा अहिले पतिको अधुरो र अपुरो सपना पूरा गर्ने दायित्व त छ नै त्यो भन्दाबढी हिजो द्वन्द्वबाट प्रभावित उनीजस्ता हजारौं सर्वसाधारणको दुःखमा मल्हम लगाउनु पनि छ।
विजय लामा : आशाको ज्योति (Male)
पढेलेखेका युवा सबै पलायन भइरहेका छन्। कोही खाडीमा छन्, प्राविधिक ज्ञान सिकेकाहरु त अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता मुलुकमै केन्द्रित छन्। तर, पञ्चायतकालदेखि कुरीतिले झेलेको नेपाली समाजमा आशाको ज्योति छर्न अमेरिकामा आफ्नो पढाई सकेपछि नेपाल फर्किए, विजय लामा। मुलुकभित्र सम्भावना खोज्न, जड भएको बसेको दुषित व्यवस्थासँग लड्दै अघि बढेका लामा अहिले नेपाल वायुसेवा निगमका उपनिर्देशक छन्, र सिनियर क्याप्टेन पनि। नयाँ दिल्लीदेखि दुबईसम्म सिंगापुरदेखि हङकङ र बैंककसम्म नेपाली ध्वजावाहक विमान पुग्दा संसारभरका मानिस पाइलट विजय लामालाई सम्झिन्छन्। मुलुकभित्रै सम्भावना खोज्न प्रेरित गर्ने अभियन्ता हुन् लामा। नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि लामाले गरेको प्रयासका लागि नै शुभदिनले नेपाल इस्पाइररको सम्मान प्रदान गरेको हो।
शैलजा अधिकारी : जसले फेसन फुलाइन् (Female)
शैलजा अधिकारीले नेपालमा फेसन स्थापित गराउन ठूलै क्रान्ति गरेकी छिन्। फेसन शिक्षा लिने कसैले पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्ने कुरा उनले स्थापित गराएकी छिन्। उनीकहाँ पढ्ने विद्यार्थी कसैले बुटिक खोलेर जिन्दगी चलाइरहेका छन्, कसैले तालिम केन्द्र खोलेर नयाँ जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्। फेसनमै आधारित रहेर नेपालमा पाठ्यक्रम भित्र्याएकी हुनाले उनी यो क्षेत्रकी हस्ती हुन्।
राजभाइ सुवाल: तस्बिर तिमीलाई (Youth)
हरेक मानिसका बेग्लाबेग्लै सौख हुन्छन्। त्यसको पछाडि कुनै न कुनै मीठो कथा जोडिएकै हुन्छ। नेपालका व्यावसायिक फोटोग्राफरका रुपमा दरिने राजभाइ सुवाललाई पनि दाजुले घर भित्र्याएको एउटा भिडियो क्यामेराका कारण आज बेग्लै परिचय मिलेको छ। कलिलो उमेरमा घरमा कुनै नयाँ जिनिस भित्रियो। कौतुहलता स्वभाविक थियो। त्यो चलाउँदा चलाउँदै फोटोग्राफीमा होमिएका राजभाइ वर्तमान समयका देशकै सवैभन्दा व्यस्त फोटोग्राफर हुन्। फोटोग्राफीले उनलाई दाम र माम त दियो नै, त्योभन्दा बढी नाम दिएको छ। फोटो पत्रकारका रुपमा पनि उनको ख्याती छ। आखिर आफ्नो होस् वा पराईको फोटो सबैलाई मनपर्छ। त्यही सम्मोहको व्यापारले राजभाइ चम्किएका हुन्।
गौरी मल्ल : निरन्तरताकी प्रतीक (Female)
काठमाडौं, नक्सालमा जन्मिएकी गौरी मल्ल नेपाल चलचित्र जगतमा निरन्तरताकी प्रतीक हुन्। आफ्नो जीवनकालमा अहिलेसम्म ७० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी मल्लले ननिभाएको कुनै भूमिकै छैन्। नेपाली चलचित्र बामे सर्दै गरेको अवस्थामा उनले प्रबेश गरेकी थिइन, यो ‘चकाचौध’ क्षेत्रमा। अहिलेसम्म पनि अबिराम र अविश्रान्त रुपमै खटिएकै छिन्। हरेक भूमिकामा न्याय गर्न सक्ने उनीजस्तो बहुमुखी प्रतिभा अर्को छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला।
निश्चल बस्नेत : जसले फरक गरे (Male)
कसरी हिट भए निश्चल बस्नेत?
परम्परागत ढर्रामै निर्माण भइरहेका थिए, नेपाली चलचित्र। यस्तोमा एकाएक निश्चल बस्नेतको प्रवेश भयो। उनले चलचित्र निर्माण मात्रै गरेनन्, आफ्नो जीवन्त अभिनयमार्फत दर्शकलाई फरक ‘टेस्ट’ पनि दिए। कथा मौलिक भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपाली चलचित्र बिक्री हुन्छ भनेर प्रमाणित समेत गरिदिए। त्यसपछि नै हो, नेपाली चलचित्र जगत एकाएक ‘भाइब्रेट’ भएको। त्यसैले उनी सम्मानको हकदार छन्।
यमबुद्ध : संगीतमा नयाँ अायाम (Youth)
यमबुद्धको अधुरो सपना
एक समय नेपाली र्याप संगीतमा वर्चस्व कायम गरेका यमबुद्धले २९ वर्षको कलिलै उमेरमा मृत्युवरण गरे पनि उनका गीतहरु अझ पनि उत्तिकै गुञ्जिन्छन्। कामप्रति इमान्दार, लगनशील र कामलाई महत्व दिने यमबुद्धको जीवनी सबैका लागि प्रेरणादायी छ।
कुलमान घिसिङ : नेपालको उज्यालो (Male)
१२ वर्षअघि नै स्थायी जागिर छाडेका कुलमान घिसिङ
सहरमा कुलमान घिसिङको हाइहाई छ। नहो्स पनि कसरी? सदियौं देखि लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य सर्वसाधारणलाई उनले उज्यालो उपहार दिए। नयाँ–नयाँ योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमै लग्न सक्ने विशेष खुवीकै कारण उनको लोकप्रियता शिखरमा छ अहिले। देशले घिसिङबाट धेरै अपेक्षा राखेको छ। दिनरात नभनेर काममा खटिने उनको कार्यशैली अरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पछ्याउन सके सर्वसाधारणमा देखिएको निरासाको बादल हट्न समय नलाग्ला?
भवन भट्ट : ‘अारिगातो गोजाइमास’ (Youth)
गोरखाका युवा जापान गएर व्यवसायमा चम्किए
केही दिनअघि शुभदिनले ‘नेपाल इन्सपाइरर’का लागि संवाद गर्न खोज्दा व्यवसायी भवन भट्ट, जापानको टोकियोस्थित आफ्नो प्रतिष्ठानमा मातहत कर्मचारीलाई काममा अह्राइरहेका थिए। अधिकांशका लागि अपत्यारिलो र अविश्वसनीय लाग्ने काम भवनले गरिरहेका छन्। गोरखाजस्तो साँघुरो परिवेशबाट माथि उठेर जापान लगायतका विदेशी मुलुकमा व्यापार–व्यवसायमा जमेका उनी त्यस्ता बिरलै नेपाली युवा हुन्, जसले विदेशमा पनि सफलताको झण्डा गाढेका छन्। व्यवसायसँगै नेपाल चिनाउने अभियानमा समेत जुटिरहेका भवनको सफल निर्देशकीय भूमिका आर्थिक खबरको संगालो ‘कारोबार’ मा प्रष्टै देखिएको छ। खासगरी उनीबाट नेपाली युवाले धेरै कुरा सिक्न सक्छन्।
भवानी राणा : जुझारू महिला उद्यमी (Female)
भवानी राणा, त्यसै बनेन इतिहास
नेपालगन्जको साँघुरो वृत्तबाट राष्ट्रिय परिदृश्यमा छाएकी हुन्, भवानी राणा। उद्योग व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अघिल्लो साता राजधानीमा सम्पन्न महाधिवेसनमा उनी अध्यक्ष निर्वाचित भइन्। योसँगै एउटा इतिहास बन्यो। महासंघको ५० वर्षे लामो यात्रामा पहिलोपटक नेतृत्वको जिम्मा महिलाको काँधमा आयो। ठूलो संघर्ष र मेहनतको परिणाम थियो, यो। उनले इतिहास त बनाइन नै नेतृत्व क्षमताको परख गर्न बाँकी नै छ।
डा. सन्दुक रुइत : दृष्टिविहीनका दृष्टि (Male)
आँखा उपचार सेवा नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा ‘माइलस्टोन’कै रुपमा स्थापित भएको छ। त्यसको श्रेयको एउटा हकदार हुन्, डा. सन्दुक रुइत। अन्य रोगको उपचार गर्न नेपाली बिरामी लाखौं खर्चेर विदेशी अस्पताल धाउँछन्। तर, आँखा उपचारका लागि नेपालतर्फ सोझिने विदेशी पनि धेरै छन्। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रुइतले नेत्र उपचारमा विश्वप्रसिद्ध प्रणालीको विकास गरेर लाखौंलाई मोतियाबिन्दुको समस्याबाट मुक्त गराइसकेका छन्। उनले विकास गरेको चिकित्सा पद्धति ‘रुइतेक्टोमी’ अहिले विश्वका धेरै मुलुकले अपनाउन थालेका छन्। त्यसैले यस्ता डाक्टरलाई सलाम नगरी धरै छैन।
अंगुरबाबा जोशी : श्रद्धाकी पात्र (Female)
नेपालकै पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख
१० वर्षकै उमेरमा बिहे भएको थियो, अंगुरबाबा जोशीको। उनले कहिल्यै विद्यालयमा पाइला टेकिनन्। घरमै पढेर हाइस्कुलको पढाइ पूरा गरिन्। पतिसँगै एसएलसी पास गरेकी अंगुरबाबाले देश–विदेशका विभिन्न कलेजबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरिन्। २०१९ मा पदमकन्या क्याम्पसको प्रमुख भइन्। लामो समयसम्म त्यसको नेतृत्व गरिन्। शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं नयाँ नीति निर्माण गर्दा उनको सुझाव सल्लाह अनिवार्यजस्तै मानिन्छ। जीवनको उत्तरार्धमा पनि उनको यात्रा रोकिएको छैन। बिरामी अवस्थामा पनि लेखनलाई निरन्तरता दिएकी छन्। हजारौं विद्यार्थीकी यी गुरुआमाको अविछिन्न संघर्ष धेरैका लागि प्रेरणा बनेको छ।
रबिन्द्र पुरी : वास्तुकला ‘रिभिजिटेड’ (Youth)
यसरी बन्छन् ढुंगा-माटोकै घर भूकम्प प्रतिरोधी
पुरानो वास्तुकलामा संरक्षण अभियानमा लागिरहेका नेपाली समाजमा ढुंगा, माटो, इँटा, काठबाट बनेका घर पनि सुरक्षित हुन्छन् भनी ती चिजबाट घर निर्माण गरिरहेका छन्। ढुंगा, माटो, इँटा र काठद्वारा निर्मित घर पनि भूकम्पप्रतिरोधी हुन्छन् भनी उनी प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन्। नेपालमा ८०/९० को दसकमा पुराना घरहरूको नरसंहार सुरू भएको सहन नसकेर यो अभियानमा हिँडेका उनले ठाउँ ठाउँमा बस्ती निर्माण गरिरहेका छन् र नयाँ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन्। उनले आफ्नो आधा कमाइ अभियानमा खर्चेका छन्। पुरानो वास्तुकला लोप भइरहेको समाजमा उनले थालेको यो अभियानले धेरैलाई पुरानो वास्तुकला के हो र यसले कसरी घर निर्माण गर्न सकिन्छ भनी समाजमा प्रेरणा दिएको छ।
ओमप्रकाश अर्याल : न्याय थला पर्न दिएनन् (Youth)
अनेकौं झेल्दै पनि निरन्तर लगातार चार वर्ष संघर्ष गरेर अन्त्यमा नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मुद्या जित्न सफल भएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायक्षेत्रकै नमूना हुन्। सत्य कर्मको बाटो जतिसुकै घुमाउरो, अप्ठारो भए पनि निरन्तर डटेर लाग्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिने मिसाल उनले कायम गरेका छन्।
मेनुका थापा : चेलिबेटीकी रक्षा कवच (Female)
‘छाक टार्नकै लागि शरीर बेच्न नपरोस्’
काभ्रेमा जन्मिएकी मेनुका थापा रक्षा नेपालकी अध्यक्ष हुन्। बाल्यकालदेखि नै अन्याय र अभावबीच उनको जीवन गुज्रियो। मेनुकाको जीवन संघर्ष धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत हो। महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरूद्धको क्षेत्रमा काम गर्छ, रक्षा नेपालले। उनी सयौं असहाय, अपहेलित महिलाकी रक्षाकवच बनेकी छन्। दोहोरीमा गाउँदै गर्दा उनले क्याबिन, डान्सबार र मसाज पार्लरमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलालाई देखिन्। अनि उनको बाटो परिवर्तन भयो। पीडित महिलालाई उद्धार गर्ने संस्थामा अहिले ४० जना किशोरी र १० जना महिला छन्। यी मनकारी महिलालाई नमन्।
ज्योति बानियाँ : अधिकारका उत्प्रेरणा (Male)
उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आम उपभोक्ता नै अनभिज्ञ छन्। केही वर्षअघिसम्म ‘क्रेता र बिक्रेता’कै सम्बन्धमा सीमित थियो, नेपाली समाज। हामी उपभोग्य सामान प्रयोग त गथ्र्यौं। तर, उपभोक्ता, हित, संरक्षण र अधिकारलाई गौण ठान्थ्यौं। यस्तै, परिस्थितिबीच ज्योति बानियाँको पर्दापर्ण भयो। उनी उपभोक्ता अधिकारका बारेमा वकालत गर्न थाले। पेशाले कानुन व्यवसायी बानियाँकै कारण सरकार उपभोक्ता ऐन ल्याउन बाध्य भयो। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा राष्ट्रिय रुपमै स्थापित भयो।
रामेश्वर खनाल : सुशासनका लागि खबरदारी (Male)
थिति बसाल्न लड्ने, भिड्ने, जुध्ने व्यक्ति
रामेश्वर खनाल भिन्न स्वभावका छन्। जहाँ जान्छन्, थिति बसाल्न खोजिहाल्छन्। विकृत मानसिकता उनको सत्रु हो। जहाँ सुधारको आवश्यकता देख्छन्, हात हालिहाल्छन्। रोकावट वा दबाब आउन थाल्यो भने उनी त्यहाँ बस्दैनन्। अर्थसचिव हुँदा उनले मन्त्रीसँग विमति राख्दै राजीनामा दिए। बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा केही समय सक्रिय भए, तर छोडे। विकृति विसंगतिविरूद्धको उनको लडाइँले धेरैलाई असल मान्छे बन्न प्रेरणा दिन्छ।
शारदा भुसाल : भ्रष्टाचारसँग पाैंठेजोरी (Female)
अभिभावकबाटै अवहेलित भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता शारदा भुसाल
नेपाली साझा मञ्चकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता शारदाले निरन्तर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेकी छन्। पहिलोपटक २०६८ भदौ २५ गतेदेखि असोज ६ गतेसम्म आमरण अनसन बसिन्। दोस्रोपटक ९ दिन। र, तेस्रोपटक ‘न्याय मर्यो’ भनेर केशमुन्डन गरी अशौच बारेर १३ दिन बसिन्। यो शृंखला लामै छ। विद्रोही स्वभावकी शारदाले २०६८ मंसिर १६ गतेदेखि सूचनाको हक प्रयोग गरेर १ हजार ७ सय ८४ वटा मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरिसकेकी छन्। इमान हराउँदै गएको देशमा इमानदारिता, पारदर्शीता र जवाफदेहिताका लागि लडिरहेकी शारदा अथक यात्री हुन्।
चन्द्रकिशोर : शब्द सेतु (Youth)
यसरी बने चन्द्रकिशोर मधेस र पहाडका ‘सेतु’
पत्रकार÷लेखक तथा मधेस मामिला विज्ञका रुपमा चिनिन्छन्, चन्द्रकिशोर। लामो समयदेखि वीरगन्जलाई ‘स्टेशन’ बनाएर पहाड–मधेस चहारिरहेका चन्द्रकिशोर वर्षौंदेखिको नेपाली एकता, सद्भाव र सहकार्य पछिल्ला दिनमा खलबलिँदै गएकोमा चिन्तित छन्, त्यसैले आफ्नो लेखनी र बहसमार्फत उनी समाज जोड्ने कुरा गर्छन्। ‘डेटलाइन तराई’ कोलमबाट नियमित रुपमा पाठकहरूलाई आफ्नो खरो विचार प्रवाह गरिरहेका चन्द्रकिशोर मधेसले पहाड र पहाडले मधेस नबुझ्दा समस्या आइरहेको र एकलकाँटे सोच र विचार त्यागेर खुला सोचका साथ सहकार्य गरेमा वर्तमान समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छन् ।
प्रा.डा. जीवन श्रेष्ठ : खोजका लागि सलाम (Female)
माछाका बारेमा विद्यावारिधी गर्ने पहिलाे नेपाली
माछाको विषयमा नयाँ खोज गरेकी प्रा.डा जीवन श्रेष्ठ पर्दाभित्रकी हिरो हुन्। नेपालमा कुन खोलानालामा कुन प्रजातिका माछा पाइन्छ? माछा कति संख्यामा छ? तराई, पहाड र हिमालमा किन फरक प्रजातिका माछा पाइएको होला? साधारणता यस्ता प्रश्न बहसमा आउँदैनन्। तर, जीवविज्ञानका लागि यी प्रश्नहरु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन्। वातावरणसँग जोडिएको यो विषयमा नेपालमै पहिलो पटक रहस्य खोतलेकी थिइन, श्रेष्ठले। माछाकै खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गरी विद्यावारिधी गरेकी श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४५ वर्षसम्म प्राध्यापन गरिन्। उनको अध्ययन, शैक्षिक सेवा, सामाजिक सेवादेखि राजनीतिक अभियानका विविध पाटा रोचक छन्।
सौविद्य मनोज : खाँटी नेपाली (Male)
अमेरिकाबाट फर्किएर आर्थिक सम्भावनाको खोजीमा
उच्च शिक्षा हासिल गरेका अधिकांश नेपाली युवा उज्जवल भविष्यको खोजीमा अमेरिका लगायतका सम्पन्न मुलुक भासिन्छन्। फेरि फर्केर स्वदेशमै आफ्नो दक्षता र मेहनत लगाउँदैनन्। तर, अपवाद नै भनौं। केही यस्ता युवा पनि छन्, जसले अमेरिकामा आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई नेपाल फर्किएर व्यवहारमा उतारेका छन्। तिनैमध्येका एक हुन्, सौविद्य मनोज। अहिले पनि उनलाई लाखौं तलबसहितको आकर्षक जागिरको अफर आउँछ। तर, उनी सामाजिक क्षेत्रमै रमाइरहेका छन्। विर्ल्ड नेपाल अाइडियामार्फत उनले स्थानीय विकासका लागि विदेशी सहयोग होइन, सामाजिक सहकार्य र समाजमुखी व्यवसायले नै नेपालको समग्र विकास हुन सक्ने अवधारणा बनाएरै काम गरिरहेका छन्।
अर्पण शर्मा : स्मरणमा महारथ (Youth)
संसारमै तेज दिमाग भएका अर्पण शर्मा
सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २६ तारिखका दिन बेलायतको राजधानी लण्डनमा एउटा घोषणा भयो। गिनिज वल्र्ड रेकर्डसले प्रमाणपत्र जारी गरेर भन्यो, ‘अर्पण शर्मा संसारकै सबैभन्दा तेज स्मरण शक्ति भएका व्यक्ति भएका छन्।’ हो, त्यतिञ्जेलसम्म उनका बारेमा सबै बेखबर थिए। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसले अर्पणको नाम विश्वकै तेज रहेको घोषणा गरेपछि उनी मात्रै होइन, संसारभरि रहेका नेपाली नै खुसी भए। झापा, भद्रपुर ८ निवासी शर्माले अहिले ६० वटा वस्तु सजिलै स्मरण गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन्। अरुलाई स्मरण शक्तिका बारेमा कक्षा दिन उनलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ।
नयनराज पाण्डे : साहित्यिक क्षेत्रका आलोक (Youth)
सीमान्त समाजलाई नियाल्ने सर्जक
नेपालगन्जको विविधितायुक्त समाजमा हुर्किएका साहित्यकार नयनराज पाण्डेले ‘उलार’ बिम्बमार्फत एउटा सशक्त उपन्यास लेखे। वर्तमान राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा लेखिएको त्यो उपन्यासमा नेपालगन्जीया टेष्ट पनि थियो। ‘लू’ ले सिमाक्षेत्रका पीडालाई राष्ट्रियकरण नै गरिदियो। ‘उलार’को अंग्रेजी संस्करण आउन लागेको छ। अर्को उत्कृष्ट उपन्यास ‘लू’मा नाटक निर्माण गरियो। सीमा अतिक्रमण जस्तो संबेदनशील विषय पनि उपन्यासमार्फत बाहिर ल्याउन सफल नयनराज पाण्डे नेपाली साहित्यमा आफ्नो बेग्लै छबि र छाप छोड्न सफल भएका छन्।
सीमा आभास : शब्द क्रान्ति (Female)
समाजका विकृति-विसंगति लेख्दा म कसरी फेमिनिस्ट भएँ?
कवि सीमा आभाष नेपाली समाजको चरित्र उदांगो पार्ने साहित्यकार हुन्। उनको लेखन क्रान्तिकारी मानिन्छ। उनी शब्दमार्फत समाजका विकृति विसंगति उजागर गर्छिन्। ‘म स्त्री अर्थात् आइमाई’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएपछि उनलाई ‘फेमिनिस्ट’ आरोप लागेको छ। उनको रचनामा महिला उत्थानको आवाज आयो भनेर साहित्यिक क्षेत्रबाटै प्रहार भयो। समाजमा घटिरहेका सत्य घटनालाई साहित्यमा उतार्दा म कसरी फेमिनिस्ट भएँ? भनी उनी प्रश्न गरिरहेकी छिन्।
रामलाल जोशी : आफैंमा एक कथा (Male)
बाबुले छोडेको डायरीमा ‘विद्याकी रानी’
रामलाल जोशीलाई केही महिनाअघिसम्म कमैले चिन्थे। पत्याउँथेनन्। सुदूरपश्चिमको साघुँरो साहित्यिक परिवेशमै रमाइरहेका थिए, उनी। निक्कै दुःख र धपेडीमाझ कथासंग्रह प्रकाशित गरे, ‘ऐना’। चक र डस्टर चलाएर कमाएको (शिक्षण) रकमले दुःखजिलो गरेर पुस्तक निकाले। जब यो पुस्तक बजारमा पुग्यो, ‘घाघडान’ समालोचक पनि स्तब्ध भए। कथामा सुदूरपश्चिमको आंचलिकताको स्वाद त थियो नै, त्योभन्दा बढी यस्ता मौलिक र अहिलेसम्म कसैले नलेखेका अर्ग्यानिक प्लटले धेरैको मन छोयो। नेपालको नोबेल पुरस्कार मानिने मदन पुरस्कार थापेपछि दूरदेश मानिने सुदूरका यी श्यामवर्णका रामलाल रातारात सेलिब्रिटी भए। उनको कथासंग्रह पुनःप्रकाशित गर्नका लागि एक से एक प्रकाशन गृहको लाम लाग्यो। प्रतिभा, हिम्मत र लगाव भएमा जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि त्यो एकदिन बाहिर निस्कन्छ भन्ने उदाहरणका साक्षी पनि हुन्, रामलाल। डोटीमा जन्मेर धनगढीलाई कर्म क्षेत्र बनाएर हिँडिरहेका रामलाललाई नेपाली साहित्यले नयाँ र प्रतिभावान श्रष्टाका रुपमा पाएको छ, अझै धेरै गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका उनीबाट नेपाली साहित्यका पाठकले त्यो आँश गर्नु स्वभाविक पनि हो।
पारस खड्का : कुशल कप्तान
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का नेपाली क्रिकेटका हालसम्मकै सफल कप्तानमा पर्छन्। नेपाली क्रिकेटलाई विश्वकपको मञ्चसम्म पुर्याएका पारस कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रेरणादायी व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्।
मीरा राई : साहसले सफल
माओवादी छापामारदेखि विश्वकै साहसिक महिलासम्म
माओवादी छापामार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा समेत च्याम्पियन बनेकी मीरा राई नेशनल जिओग्राफीको विश्वकै साहसिक व्यक्तीको अवार्ड हात पार्न सफल भइन्। सामान्य परिवारकी मीराको सफलताको संघर्ष युवा पिढीहरुको लागि प्रेरणादायी छ।
हरि रोकाया : हिँडाइ जारी छ
कर्णालीका ‘हिराे’ हरि
तीनपटक विश्व प्रशिद्ध एभरेष्ट म्याराथन जित्दै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका हरि रोकाया उमेरले पाँच दशक नाघिसक्दा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। कर्णाली क्षेत्रमा म्याराथनको विकासका लागि स्थानियस्तरमै कर्णाली स्पोर्टस क्लब सञ्चालन गरिरहेका रोकायले थुप्रै राष्ट्रिय खेलाडीहरु उत्पादन गरिसकेका छन्।